ikhaya AMAZIKO EMZANTSI E-AMERICA FOOTBALL I-Hirving Loancy Childhood Indaba I-Untold Biography Facts
Igqityelwe ukuvuselelwa kwi Juni 24, 2018
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Genius eyaziwayo kakhulu ngegama leethente; "UChucky". Ibali lethu le-Loving Childhood Indaba kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kwixesha lakhe lokuzalwa. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobomi, ubudlelwane bomtshato, imvelaphi yentsapho kunye neendidi ezininzi ze-OFF (ezingaziwa) malunga naye.
Ewe, wonk 'ubani uyazi malunga nesantya sakhe sokukhawuleza ngexesha lokuhlaselwa koluphiko kunye nokugqitywa kweklinikhi kwiNdebe yeHlabathi yeFIFA ye2018. Nangona kunjalo, kuphela abalandeli abambalwa abalandeli abazi kakhulu nge-Bio ye-Hirving Lozano enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, masiqale.
I-Hirving yeLozano Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Ubomi Bokuqala Nentsapho
UHirving Rodrigo Lozano Bahena wazalwa ngosuku lwe-30th ka-Julayi 1995 kubazali ababoniswe ngezantsi. Wazalelwa kunina u-Ana María Bahena noyise, uJesús Lozano eMexico City, eMexico.
Intsapho kaHirving Lozano ivela kwi-white-Mexican ubuhlanga beSpanish. Ibhola lezemidlalo liye liphawu lokuthengisa kwintsapho yaseLozano ukususela kwiintsuku zokuqala. Intloko yentsapho, uJesús Lozano (echazwe ngezantsi) wayeneminyaka engaphezu kweminyaka eqinisekisa ukuba oonyana bakhe ababini, uHirving noBryan babe ukuzimisela ngokuzikhethela ukuba ube ngumsebenzi ukususela kwixesha labo labantwana. Ndiyabulela kwimigudu yakhe ehlawulwe, ibhola lebhola ekugqibeleni lithatha intsapho yakhe ngaphandle kokuphila okuphakathi.
Ukususela kwiintsuku zabo zobuntwana, oonyana bakhe, uHirving noByran (okuchazwe ngezantsi) babanjwe amaphupha abo ebhola bebhola kunye neenjongo zabo zazingekho nje ukugqithisa.
ULozano wasebenzisa iminyaka yakhe yokufundisa njengomdlali webhola Iikhilomitha ze-90 ngasentla kwinqununu kwisixeko saseP Pachuca. Kwakulo mzi wavuka ukuba adume, ahlakulele umnqweno omkhulu wokuphumelela kunye nokunyuka kwiqela lakhe lolutsha.
I-Hirving yeLozano Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Iqhayiya
UHirving Lozano ngelixa ephakama udumo wafumana igama elithi 'Chucky'esicinga ukuba uyazi ukuba kuthini.
Igama lakhe lomnxeba linemvelaphi yalo kudodoli ogama lakhe Chucky ye 'Udlala Umntwana' uchungechunge lwefriji. UHirving Lozano kuthiwa ufumene isiteketiso ngexesha lomsebenzi wakhe wolutsha xa wayehlala efihla phantsi kombhede ezindleleni zokuhamba ukuze ahlasele abantu beqela lakhe ngokuzenzele ngokuzenzekelayo nge-Chucky look.
I-Hirving yeLozano Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
Njenge Anthony Martial, UHirving Lozano waqalisa yakhe intsapho ukususela emncinci. Ukwenza isigqibo somtshato esasemncinci kubonisa ukukhula kuye kwaye amathuba okuba umntwana onomtsalane unokuba yinye isiqingatha.
U-Hirving Lozano waqala ulwalamano lwakhe kwindawo yokudlala ebuntwaneni bakhe obumnandi obizwa ngoAna Obregon.
Ulwalamano lwabo lwaba thabatha ebantwaneni bebantwaneni baze bawabela uthando lokwenene. Esi sibini sadibana bebantwaneni nje eCophuca apho uLozano waqala khona ibhola.
Emva kokuthandana iminyaka, ekugqibeleni babophe iqhosha kwi-2014 xa uLozano beyiminyaka eyi-18, ixesha apho wenza i-career yakhe yobungcali kwiqela lakhe eliphezulu. Kwakuyixesha eligqibeleleyo lokucwangcisa umtshato.
Ababini, abathandekayo banabantwana ababini (okuchazwe ngezantsi). Umntwana wabo wokuqala kunye nentombi, uAna Daniela wazalwa ngoJanuwari 2014. Abazali bakaHirving Lozano bavuya ngokubona ngokuzalwa kwabo kunye negama lomzukulu wabo othandekayo.
Iminyaka emithathu kamva, ngokukhawuleza ngo-Meyi 2017, uRodrigo unyana wakhe wokuqala kunye nomntwana wesibini wazalwa. Ngezantsi abantwana bakaHirving Lozano bahlotshiswe njengenkosi kunye nookumkanikazi ngoyise (inkokheli ezalwa ngokwenyama).
UHirving Lozano uye watsho ukuba ekubeni abantwana bakhe befikile, ubomi bakhe buye kwahluke kwaye kubaluleke kakhulu, kuthathe uguquko olunamandla. Ukujonga emfanekisweni apha ngezantsi, ukufana okukhoyo phakathi kobawo noonyana kunye nonina nentombi.
I-Hirving yeLozano Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Iinkcukacha zobomi bomntu
UHirving Lozano ungumntu onjengekhaya othanda ukuchitha ixesha ekhaya. Izinto zokuzonwabisa ezisekhaya ziquka ukuhlamba izitya, ukugaya, ukutshaya nokuncedisa uAna Obregon ekhitshini. Uyakuthanda ukuthenga izindlu zezingane zakhe kunye nokuzibandakanya nabo.
I-PSV yanika uLozano isipho semoto njengendlela yokubonga ngokuba ngumdlali wabo obaluleke kakhulu. Iqela alizange lidibanise ukubonakalisa ulonwabo lomdlali emva kokummisa ngemoto njengendlela yokumyeka kwezinye iiklabhu.
ULozano unomdla, udala, uqinisekile. Ungumntu onokukwazi ukufezekisa nantoni na ayifunayo kwintsimi yokudlala. ULozano uyakwazi ukusebenzisa ingqondo yakhe ukufunda iimidlalo nakwiqela elinzima kakhulu. Oku kubonwe kumdlalo wokuqala weNdebe yeHlabathi ye-FIFA ye-2018 kwiJamani.
I-Hirving yeLozano Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Umdlalo we Play
Ukunyuka kwakhe kweempawu zeFIFA (ukuthelekisa iFIFA 16 kunye neFIFA 18) eyenziwe UDon Balón uchaza uLozano njengomnye wabadlali ababalaseleyo emhlabeni ozalwa emva kwe1994.
ULozano unayo zonke iimpawu zewindi yecala eliguquguqukayo. Unobungozi xa ekhunjulwa emva kokusika ukusuka kwicala lasekhohlo. ULozano ukhawuleza kunye okanye ngaphandle kwebhola kwaye unesibindi esinamandla nesinyanisekileyo.
Ukunyuka kweLozano ukususela kwiNdebe yeHlabathi yeFIFA yeFIFA yeHIFA. Ubungqina bakhe bokuhlasela, ukukhawuleza kunye nokuqwashiswa kwendawo kuthathwa njengelungelo lokudumisa kubalandeli. U-Hirving Lozano akungabazeki, i-FIFA yeyona nto ikhethiweyo ngokugqibeleleyo.
I-Hirving yeLozano Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Eminye Imiba Yomntu Nomntu
Ngokubhekisele ekuthathaka kwakhe, uLozano wayenokuzikhukhumeza, enenkani, enokuzimela, enobuqili kwaye engapheliyo. Ubuthathaka bakhe bomsebenzi kubandakanya ukungahambelani ngexesha leminye midlalo kunye nokungabikho kolwazi lokuzivikela.
ULozano uthanda iTheatre, ethatha iholide, eyanconywa kwibala kunye nokuzonwabisa nabangani.
ULozano akayithandi ukunyanzelwa, ejongene nobunzima kwaye engaphathwa njengenkosi.
Ukujonga ingxelo yeHirving Lozano yentsapho, kuphawulwe ukuba uHirving Lozano uyindodana yokuqala yentsapho. Njengendodana yokuqala, wahamba ngeenyawo umntakwabo umlandele. Oku kwenza ukuba abe yinkokeli yemvelo.
QHUBEKA: Siyabulela ukufunda i-Hirving Lozano Childhood Indaba kunye neenkcukacha ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke ingxelo yakho okanye uxhumane nathi!
I-Douglas Costa Childhood Indaba I-Untold Biography Facts
UDani Alves Ibali leBantwana Ingxelo ye-Untold Biography Facts